Porn သည်နက်ရှိုင်းသောနက်နဲသောဆက်ဆံရေးဗီဇများကို - Porn On Your Brain
porn နက်ရှိုင်းသောဆက်ဆံရေးဗီဇ Derails
မာကု Chamberlain ပါရဂူဘွဲ့အားဖြင့်
အခြားလူ့ဖြစ်လျက်ရှိနှင့်အတူဘွန်းလိုပါသလား? ဤတွင်သင့်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နေသောခေါင်းစဉ်: ဖတ်ပါနှင့်တုံ့ပြန်ကြသည်။ (လွတ်လပ်စွာသူတို့ပဲဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ၏ထက်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရာလုပ်နေတာ) သင့်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ signal ကိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အပြန်အလှန်ထို့နောက်သူတို့ထံမှတစ်ဦး signal ကို Read (ထက်ကလျစ်လျူရှု) ။ ထိုသို့သကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောရဲ့ Read နှင့်တုံ့ပြန်ကြသည်။
ပြန်လုပ်: yeah အိုးတစျခုထက်ပိုပစ္စည်းလည်းမရှိ။
ဒီတော့အတူတူကအားလုံးကိုထားကြကုန်အံ့, ဒီမှာဝင်: ဖတ်အပြန်အလှန်ဖော်ဆောင်ရန်, အဆတသောင်း။ အိုကေ, တစ်ဦးအနေဖြင့်ယူပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ထားပြီးပြီပြီးတာနဲ့သင်၌အားကြီးသောနှောင်ကြိုးဆောက်ပါလိမ့်မယ်။
မရသာငါသည်ဤညွှန်ကြားချက်ကိုတက်စေဘဲကိုယ့်ကိုတောင်သင်ကသူတို့ကိုပြောပြရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့အသိလုပ်, ဒီလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးချစ်ရသူနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သင်ယူကြပါဘူး။ ကျနော်တို့နို့စို့အရွယ်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်နေကတည်းကသူကလုပ်နေခဲ့ကြရတယ်။
1975 ခုနှစ်, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင် Ed က Tronick ပင်ကလေးပူးတွဲမှု၏ဤကခုန်ကျွမ်းကျင်ကြောင်းကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ မိခင်များနှင့်သူတို့၏သားသမီးများ၏အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်အကဲခတ်သူမိခင်များသူငယ်များမှာအလွတ်မျက်နှာများနှင့်အတူကြည့်ခဲ့လျှင်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုအံ့ဩကြ၏။
သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးမိခင်များ reengage မှ Tronick ရဲ့လေ့လာမှုကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကွန်နက်ရှင်, ကလေးပြန်လည်ဖြစ်ထွန်းရန်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ cutest အပြုံးများဝတ်ဆင်ပြီးနှင့်၎င်းတို့၏အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ coos ထုတ်လွှတ်။ ကွက်လပ်ပြူးကြည့်ဆက်ရှိနေသောအခါ, မွေးကင်းစ '' ဒုက္ခဆင်းရဲအဆင်မပြေမှုအထိကြီးထွား။
ဒီစောင့်ကြည့်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ Tronick ရဲ့အနည်းငယ်သာစမ်းသပ်မှု၏ဗီဒီယိုကို။ သင်ပြုသကဲ့သို့သင်တို့၏အတွင်းပိုင်းအပေါ်တတ်သောအရာကိုသတိပွုပါ။
ရှေ့ဆောင်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုသီအိုရီယောဟနျသ Bowlby အဆိုအရ, ဤအမှေးရာပါပူးတွဲမှုစနစ်ကကျွန်တော်လူငယ်တစ်ယောက်ပါပဲရုံတဲ့အခါမှာဘဲ, ချစ်ရသူဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားသော၎င်း၏အရေးကြီးသောအလုပ်မ, ဒါပေမယ့်လမ်းခရီးတရှောက်လုံးကို "သင်္ချိုင်းတွင်းကိုဖို့ပုခက်ထဲကနေ။ "
ကိုချစ်ပြီးရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ချစ်မြတ်နိုးခံစားရနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်တူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သွားကြဖို့ရပါမည်: ဖတ်အပြန်အလှန်ဖော်ဆောင်ရန်နှင့်ပြန်လုပ်ပါ။ ဒါပေါ်ကြော်ငြာ infinitum ။
ကျနော်တို့ငါတို့ချစ်သောမှရေးဆွဲနေကြသောကြောင့်, ကျနော်တို့ attune သူတို့ပေးပို့သည့်အချက်ပြမှုများမှတက်ရောက်ရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။
တစ်နေရာငါ့နှလုံး၌ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့သူမကပေးပို့ခြင်းရဲ့မည်သည့်အချက်ပြမှုဆီသို့အနေအထားတစ်ခုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသံလိုက်မြှားရှိပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့နှစ်ခုဒေါ်လာစျေးသံလိုက်အိမ်မြှောင်ငါ Boy Scout အခါလမ်းခရီးတရှောက်လုံးမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကနေ signal ကိုကောက်ဖို့စီမံလမ်းစီ။
မြောက်ကိုရီးယားဝင်ရိုးစွန်းကဲ့သို့အစွမ်းထက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ငါ့ကြီးတွေအစ်ကိုတစ်ဦး wizardly feat ချွတ်ဆွဲထုတ်။ သူမြှားကျအောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်အထိ-boing တစ်သံလိုက်ပိုမိုနီးကပ်စွာနှင့်ငါ၏သံလိုက်အိမ်မြှောင်ပိုမိုနီးကပ်စွာယူဆောင်! နည်းနည်းသတ္တုပါးမြှားသည်သူ၏ဦးတည်လှုပ် -its ။
ဒါကြောင့် (အဟမ်း!), ဘယျအရာကဒီညစ်ညမ်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိသနည်း
ငါတို့ရှိသမျှသည်ယခုကြီးပြင်းပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သံလိုက်နည်းနည်းသတ္တုပါးမြှားနေဆဲနူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ကြသည်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအမြဲသေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစစ်အမှန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလူ့ပူးတွဲမှုကိန်းဂဏန်းဆီသို့ Oriental ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကြီးတွေအတွက်ဆောင်ကြဉ်းလာသောအခါဘာဖွစျ Nd သည်သံလိုက် porn လော
သူမကသူ porn သို့ခဲ့ထုတ်တွေ့ရှိရတောင်မှမတိုင်မီတစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားဖူးနဲ့တူပါကထိုမိန်းမငယ်အားခံစားခဲ့ရသည်။ သူသလိုပဲ ...
, အာရုံပြံ့လှငျ့နှင့်ရှိရာသို့ သွား.
စိတ်လှုပ်ရှားမှု detach လုပ်လိုက်သော။
အထီးအဘို့မရှိ, signal ကိုသူသည်မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအလိုရှိတော်မူကြောင်းကိုမှတ်ပုံတင်ထက်ပိုကြီးတဲ့ wallop pack မှာ။
စစ်မှန်သောအသက်တာ၌, ဒီငွေပမာဏသည်သိသိသာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲမလာပါဘူး။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုသည်းခံခြင်းနှင့်အားထုတ်မှုနဲ့ရုံပိုင်ခွင့်ထိတွေ့တဲ့အကြီးအသဘောတူညီချက်လိုအပ်သည်။ သင်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကိုတုံ့ပြန်နဲ့ပြန်လုပ်ဖတ်နဲ့ကိုတုံ့ပြန်နဲ့ပြန်လုပ်ပါ။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမယုတ်အောင်မြင်ခြင်းပါပဲ။
ထိုအသေး, မှတ်တမ်းတင်ထားသောသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးနှင့်စာပေ, ဂီတ, အနုပညာအပေါငျးတို့သများတွင်ပိုက၎င်း၏ဆင်ခြေလျှော၏မတ်စောက်မျထက်ဤ quest ၏ပျော်ရွှင်မှုကျင်းပနေရှိပါတယ်။ အဆိုပါသို့ဆိုက်ရောက်အငတ်များအတွက်သတ်ပိုပြီးလာပါ, ခရီးအဘို့အချိုဖြစ်ပါတယ်။
porn, ဒါကြောင့်အလွယ်တကူဝင်ရောက်နှင့်အကောငျးဆုံးပျြောမှေ့စ, ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းကျနော်တို့သဘာဝကျကျတောငျ့, ဒါပေမယ့်တစ်ကယ့်ဘဝဆက်ဆံရေးအပေါငျးတို့သကူညီပြီးမပါဘဲအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက် signal ကို evokes ။
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့ပစ္စည်းပစ္စယပေါ်တက် load မဟုတ်လော သင်ကသို့ရောက်နေတစ်ချိန်ကထို့နောက်အဘယျကွောငျ့အစစ်အမှန်အရာမှနောက်ကျောကိုသွား? အစဉ်အဆက်?
မရှိဘဝရှိတယ်: အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုပြောပြပါပြန်လာရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်သောငါ့ clients များ။ ဒါဟာအားလုံး Overload ပါပဲ။ အဘယ်သူမျှမအပြန်အလှန်မျှဆက်စပ်မှုတွေ။ ဒါဟာအားလုံး boing နှင့်မျှမတို့ရှာပုံတော်ပါပဲ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီသည်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူအားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အမှတ်ပေး touchdowns အိမ်ပြေးများနှင့်တွင်း-In-One ဖို့ cheat code ကိုရှာတွေ့နဲ့တူရဲ့။ ဦးနှောက်ကအဓိပ်ပာယျကငျးမဲ့င့်က register လုပ်သွားအဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလျော့နည်းဒါပထမဦးဆုံးမှာအကြီးခံစားရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဆက်ဆံရေးအခြေခံခြင်းမရှိဘဲ, ကျွန်တော်တစ်ဦးအောက်ဖက်လိမ်အတွက် careen ။ "ငါသည် moy styandads lyowa နိုင်သည်ထက် Moy Loyf အဆိုပါ cryappa fyasta dyown '' gyoin ဖြစ်ပါတယ်။ ": ငါဘော်စတွန်၌ဆုံးမဩဝါဒတစ်ဦးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာကုထုံးပါဝင်သူများထဲမှတစ်ဦးသည်သူ၏ညစ်ညမ်း-စွဲဖောက်သည်တဦးတည်းကိုးကား
porn ပေါ်တက်ဟောဒီမှာ၏ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးအကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်: ကျနော်တို့အနေနဲ့အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်များနှင့်သူတို့မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖမ်းယူပေးပို့ခြင်းနေအချက်ပြမှုများကိုကြှနျတျောတို့၏ attunement ရှုံးသည်။ GAIL ကသူမ၏စာအုပ်တွင်လေ့လာတွေ့ရှိ Dines အဖြစ်, Pornland အတော်လေးထိထိရောက်ရောက် porn (2010, 74) "ယောက်ျားအမျိုးသမီးနာကျင်မှုမှ desensitized ဖြစ်လာရန်လေ့" ။
အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်: ညစ်ညမ်းကျန်းမာပူးတွဲမှု၏အနှစ်သာရတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကိုဘယ်လိုဖွင့် နောမိ Wolf က ဒါကြောင့်ကိုထည့်လေ့မရှိ: "ဝေး porn-crazed လုလင်တို့သည်ပယ်မိမိဘာသာအားကိုးရှိခြင်းကနေအမျိုးသမီးငယ်ကြောင်းအဖြစ်မျှသာအသွေးအသားစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်, သူတို့ကခဲ, သူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရကြကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းကိုင်ထားနိုင်တယ်။ "
Wolf ကရဲ့အငြင်းအခုံ, တဦးတည်းမှတုန့်ပြန် စာဖတ်သူကို commented- လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်မရဲ့လိင်မှုကိစ္စဟာကိုင်တွယ်မှုအတွက်လွယ်ကူတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ဤသည် porn ၏ဆွဲဆောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရှင်းပြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကတစ်ခါမျှမရှိခဲ့ဖူးသောလွတ်လပ်မှုမျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ငါတို့၏အားနည်းချက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများကိုညီမျှခြင်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်း၊
သူသာလိင်တစ်ဦးညီမျှခြင်းဖြစ်လျှင်တဦးတည်းအချက်ဖျက်သိမ်းရေး, ညီမျှခြင်းပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုကြင်အကြောင်းကိုညာဘက်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ထားတဲ့ညီမျှခြင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်၏ messier ဘုံ၌ထွက်ကပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ပြောင်းလဲနေသော-a-ထို့နောက်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမဖွင့်ပါ။
မာကု Chamberlain, Ph.D
Author: , သင်နှစ်သက်သော Porn မုန်းတယ်